ဝန်ဆောင်မှုများ - Soe San Lynn Co.,LTD.
Soe San Lynn Realestate
စိုးစံလင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ
လုံးချင်းအိမ်၊ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်း၊ မြေကွက်/ခြံ၊ စက်မှုဇုန် စသည်တို့ကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ရောင်း/ငှား ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးပါသည်။
လုံးချင်းအိမ်၊ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်း၊ မြေကွက်/ခြံ၊ စက်မှုဇုန် စသည်တို့ကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ငှားရန်းပေးပါသည်။
For Sell & Rent
ကမာရွတ်၊ လှိုင်၊ စမ်းချောင်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကင်း၊ တာမွေ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ အလုံ၊ လမ်းမတော်၊ လသာ၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တထောင်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်၊ မရမ်းကုန်း၊ အင်းစိန်၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ၊ မှော်ဘီ၊ တိုက်ကြီး၊ လှည်းကူး၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ တောင်ဒဂုံ၊ အရှေ့ဒဂုံ၊ သာကေတ၊ သန်လျင်၊ ကျောက်တန်း၊ တွံ့တေး၊ ဒလ
Soe San Lynn Co.,LTD.
အမြန်ဆုံးရောင်းချလိုသူများအတွက် သတင်းစာနှင့် စီးပွားရေးဂျာနယ်တွေမှာ အခမဲ့ကြော်ငြာပေးပြီး အသင့်တော်ဆုံး ကာလပေါက်ဈေးနှင့် အမြန်ဆုံး ရောင်းထွက်သွားအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
ဝယ်သူ၊ ငှားရမ်းနေထိုင်လိုသူများအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်ကန်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ တိုက်၊ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေများကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျသည့်အထိ အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများက အခမဲ့ လိုက်လံရှင်းလင်းပြသပေးပါတယ်။
တိုက်၊ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ များနှင့် ပတ်သက်လို့ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ မှန်ကန်ခြင်းရှိ၊ မရှိ/ ရောင်းသင့်၊ မရောင်းသင့်/ ဝယ်သင့်၊ မဝယ်သင့်၊ ဈေးကွက်အနေအထား၊ ကာလပေါက်ဈေး၊ စတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး "စိုးစံလင်း အကျိုးဆောင်" နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
01 751 0600
01 552 742
09 517 3690 | 09 504 0160
အမှတ်(၇၀)၊ ပထမထပ်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ စံရိပ်ငြိမ်မှတ်တိုင်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
© Copyright 2021 Soe San Lynn Realestate Co.,Ltd. All Right Reserved & Developed By DigitalMarketing.com.mm